15 Ajuju I Kwesịrị Askjụ Banyere API Ha Tupu Selecthọrọ Nhazi | Martech Zone
Ezigbo enyi na onye ndụmọdụ dere ajụjụ m ga-achọ iji azịza m maka post a. Ajụjụ ya dị ntakịrị ilekwasị anya na otu ụlọ ọrụ (Email), yabụ akọwapụtara m azịza m niile na API niile. Ọ jụrụ ajụjụ ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịjụ onye na-ere ha banyere API ha tupu ha ahọrọ.
Kedu ihe kpatara I ji chọọ API?
An ngwa mmemme (API) bụ interface nke sistemụ kọmputa, ọba akwụkwọ, ma ọ bụ ngwa na-enye iji kwe ka arịrịọ maka ọrụ rụọ ọrụ site na mmemme kọmputa ndị ọzọ, yana / ma ọ bụ iji nyefee data n'etiti ha.
Dịka ị pịnyere na URL wee nweta nzaghachi na ibe weebụ, API bụ usoro ebe sistemụ gị nwere ike ịrịọ wee nweta nzaghachi iji mekọrịta data n'etiti ha. Dika ulo oru choro ka ha gbanwee onwe ha, imeputa oru site na API bu uzo di uku iji melite oru oma n’ime nzuko ma belata njehie mmadu.
API bụ ihe dị mkpa na akpaaka, ọkachasị na ngwa ngwa ahịa. Otu n’ime ihe ịma aka mgbe ị na-azụrụ nnukwu onye na-ere ihe nwere ihe zuru ezu API bụ na mmepe akụrụngwa na mmefu na-abụkarị ihe mgbe echiche. Ndị otu ahịa ma ọ bụ CMO nwere ike ịbido zụta ngwa yana oge ụfọdụ ndị mmepe anaghị enweta ọtụtụ ntinye.
Inyocha ikike njikọta ihe ikpo okwu site na API chọrọ karịa ajụjụ dị mfe, Enwere API?
Ọ bụrụ na ịbanye na ngwa nke ejiri API na-akwadoghị ma ọ bụ ederede, ị ga-eme ka ndị otu mmepe gị nwee nzuzu na njikọta gị ga-abịa dị mkpụmkpụ ma ọ bụ daa kpamkpam. Chọta ezigbo onye na-ere ahia, njikọta gị ga - arụ ọrụ ma ndị mmepe ga - enwe obi ụtọ inye aka!
Ajụjụ nyocha banyere ikike API ha:
Njirimara Gap - Chọpụta ihe njirimara nke Ntuziaka Ndị Ọrụ ha dị site na Usoro Nhazi Ngwa. Kedu atụmatụ ndị API nwere na UI enweghị ya na nke ọzọ?
ọnụ ọgụgụ - Jụọ ole oku ka akpọrọ ha API kwa ụbọchị. Ha nwere ọdọ mmiri raara onwe ha nye nke sava? Ọnụọgụ dị oke mkpa ebe ọ bụ na ịchọrọ ịchọpụta ma API ọ bụ ihe emechara ma ọ bụ akụkụ nke atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ.
Documentation - Jụọ maka akwụkwọ API. O kwesiri ekwesiri ike, na-akoputa ihe obula na agbanwe di na API.
Community - Jụọ ma ha nwere obodo Mmepụta dị n'ịntanetị dị maka ịkekọrịta koodu na echiche yana ndị mmepe ndị ọzọ. Obodo Mmepụta bụ isi ihe na-eme ka ịmalite mmepe gị na mbọ mwekota ngwa ngwa na nke ọma. Kama ị na-ebunye 'onye API' ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​na-enye ndị ahịa ha niile nsogbu, ndị nwetagororị ule na njehie ijikọ azịza ha.
IZU vs NT. - Jụọ ụdị API ha nwere… Elezie enwere REST API na API Web Services (SOAP) API. Ha nwere ike na-emepe emepe abụọ. Ijikọta na nke ọ bụla nwere elele na nkọcha… ị kwesịrị ịmara nke ọma ikike nke ike mwekota '(IT) gị.
Asụsụ - Jụọ ụdị nyiwe na ngwa ha jikọtara nke ọma ma rịọ ndị kọntaktị ka ị wee nwee ike ịchọpụta n'aka ndị ahịa ahụ otu o siri sie ike ijikọ yana otu API si arụ ọrụ.
-agaghị emeli - Jụọ ihe mgbochi ndị na-ere ahịa nwere n'ọtụtụ oku kwa awa, kwa ụbọchị, kwa izu, wdg. Ọ bụrụ na ịnọghị na onye na-ere ahịa nwere ike ịba ụba, uto gị ga-ejedebe site n'aka onye ahịa.
n'omume - Ha na-enye ọbá akwụkwọ nke usoro ihe atụ iji bido? Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebipụta SDK (Ngwaọrụ Development Software) maka asụsụ dị iche iche na etiti ga-eme ka usoro iheomume gị rụọ ọrụ ngwa ngwa.
sandbox - Ha na-enye njedebe ma ọ bụ gburugburu ebe a na-enweghị mmepụta ka ị nwaa koodu gị?
Akụrụngwa - Jụọ ma ọ bụrụ na ha raara onwe ha nyekwara ihe ngwakọta n'ime ụlọ ọrụ ha Hà nwere otu ndị na-agba izu dị maka mjikọta? Ọ bụrụ otú ahụ, tụfuo awa ole na ole na nkwekọrịta ahụ!
Security - Kedu ka ha si eji API eme ihe? Ọ bụ nzere ndị ọrụ, igodo, ma ọ bụ usoro ndị ọzọ? Ha nwere ike igbochi arịrịọ site na adreesị IP?
Kwa oge - Jụọ ihe ha API oge na-ezighị ezi na ọnụego njehie bụ, yana mgbe oge mmezi ha dị. Ọzọkwa, atụmatụ iji rụọ ọrụ gburugburu ha dị mkpa. Ka ha nwere esịtidem Filiks ga-re-nwaa API oku na ihe omume ndekọ ahụ adịghị maka usoro ọzọ? Nke a ọ bụ ihe ha rụpụtara na ngwọta ha?
SLA - Ndi ha nwere a Nkwekọrịta Ọrụ Ọkwa ebe oge kwesiri ibu karie 99.9%?
Roadmap - Kedu ihe ga - eme n'ọdịnihu ha na - etinye n'ime API ha na ihe nhazi usoro nnyefe a tụrụ anya ya?
Mmekọrịta - Kedu njikọ dị iche iche mepụtara ma ọ bụ nke ndị ọzọ mepụtara? Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịhapụ mmepe nke atụmatụ na njirimara mgbe ngwakọ ngwaahịa ọzọ dị adị ma na-akwado ya.
Isi okwu n’ajụjụ ndị a bụ na njikọta ‘lụrụ’ gị n’elu ikpo okwu. Chọghị ịlụ onye na-amataghị ihe niile ị nwere ike ime gbasara ha, ị chọghị? Nke a bụ naanị ihe na - eme mgbe ndị mmadụ zụrụ ikpo okwu na - enweghị ihe ọmụma banyere ike ha nwere.
Na-abụghị API, ị kwesịrị ịnwale ịchọpụta ihe mgbakwunye ndị ọzọ nwere ike ịnwe: Barcoding, nkewa, ọrụ nhicha data, RSS, Fordị Weebụ, Wijetị, Mmekọrịta Mmekọ Ọha, Ederede Ederede, SFTP tụlee, wdg.
Tags: APIapi akwụkwọapi nyochaapi atụmatụapi ajujuapi nyochantinye ntinye ihe omumeatụmatụfọduruakpụkpọ ụkwụsdknkwekọrịta larịị ọrụ
Nnukwu ọdịnaya dị ka Doug mgbe niile!
Daalụ nke ukwuu, Jon! Na-ekele onye ọ bụla oge ọ bụla ịhapụ ederede dị mma.
Aug 5, 2021 na 3: 37 AM